War ma ka heysaa mushaarka ay qaataan madaxda hay’adaha dowliga iyo kuwa gobolka… – Hagaag.com
War ma ka heysaa mushaarka ay qaataan madaxda hay’adaha dowliga iyo kuwa gobolka…
Dhowr sano ka hor ayaa la weydiiyay Afhayeenka Qaramada Midoobay cadadka mushaharka uu qaato Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, waxay jawaabtiisu aheyd wuxuu hayaa shaqo aad u weyn si uu u helo lacag.
Laakiin madaxda iyo shaqaalaha sare ee ururada caalamiga ah iyo kuwa goboleedka ayey qaataan mushahar aad u badan, kuwaasi oo qaarkood ka mushaar badan madaxda dowladaha iyo wasiiradaha dowladaha horumaray iyo kuwa seddaxaadba sidoo kale.
Haddii aan qaarkood soo qaadano:
Sida laga soo xigtay warar isku mid ah, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa qaata $ 227,253 sanadkii, ama $ 19,000 bishii. Ma jirin wax isbeddel ah oo lagu sameeyey mushaharkan tan iyo 1997.
Marka laga soo tago mushaarka, Xoghayaha Guud wuxuu leeyahay miisaaniyad gaar ah oo loogu talagalay madadaalada, ururkuna wuxuu bixiyaa guryo bilaash ah iyo badbaado ammaan oo mar walba ah.
Madaxwaynaha hadda ee Golaha Yurub, Donald Tusk, wuxuu bishii mushaar u qaataa € 32,700 ($ 36,624). Sidoo kale waxaa isla lacagtaasi mushaar ahaan u qaata Gudoomiyaha Guddiga Yurub Jean-Claude Juncker.
Madaxwaynaha Golaha waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hogaamiye Dowlad. Guddoomiyaha Guddiga waa hogaamiyaha Hay’adda fulinta ee Ururka Yurub wuxuuna leeyahay mas’uuliyado la mid ah kuwa madaxyada dowladda.
Waxaa soo raaca 27 xubnood, oo u dhigma sida wasiiro, mid kastana wuxuu qaataa 20,000 euro bishiiba.
FIFA (Xiriirka kubbada cagta ee adduunka)
Madaxweynaha haatan ee Xiriirka Kubadda Cagta (FIFA) Gianni Infantino wuxuu qaata $ 1.5 milyan sannadkii, ama $ 125,000 bishii.
Xoghayaha Guud ee Ururka Fatima Sumara ayaa qaadata $ 837,000 sanadkiiba.
Inkastoo tirada lacagtani ay aad u badan tahay laakin waxay ka yar tahay intii uu qaadan jiray madaxii hore ee FIFA Joseph Blatter, wuxuu qaadan jiray $ 3.6 million sanad walba, halka Xoghayahiisa Guud uu qaadan jiray wax ka badan laba milyan oo doolar sanadkii.
Sanduuqa Lacagta ee Caalamiga ah,
Agaasimaha Hay’adda Lacagta Adduunka ee Caalamiga ah Christine Lagarde ayaa mushaar ahaan sannadkiiba hesha 467 kun oo doolar, waxaa u dheer gunnooyinka kale oo u dhigma 80 kun doolar.
Warbixino laga helay Bangiga Adduunka sanadkii 2013 ayaa waxay sheegeysay in maamulaha ama agaasimaha bangiga adduunka uu qaato 476 kun oo doolar sannad walba, halka mushaaraadka mas’uuliyiinta sare sare ee Bangiga’u dhaxaya 211 ilaa 380 kun oo doolar sanadka kasta.
Sida ay sheegayaan wararka saxaafadda dalka Masar in Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta sannad walba uu qaato 502 kun oo doolar, taas oo macnaheedu ay tahay in bishiiba uu qaato 42 kun oo doolar, oo u sii dheer tahay gunnooyin lagu qiyaasay toban kun oo doolar bil walba.
Sida caadiga ah, dhamaadka adeega Xog-hayaha Guud wuxuu helaa hal milyan oo doolar sanad walba intii uu hayey xilkaasi. Laakiin Xoghayihii guud ee Jaamacada Carabta ee hore Nabil al-Arabi ayaa qaatay $ 7 milyan markii uu ka tagay xafiiska June 2016, inkastoo uu shaqeynayay muddo shan sano ah.
Mushaarka ku xigeenka Xoghayaha guud ee Jaamacada Carabta ayaa bishii qaata 35 kun oo doolar, halka madaxda ururada 11ka ah ee Jaamacada ay helaan ku dhowaad 12 kun oo dollar bil kasta.
Ururada dowliga ee kale,
Hay’adda Qaramada Midoobay ee Waxbarashada, Sayniska iyo Dhaqanka (UNESCO), ayaa saraakiisha sare sare qaata $ 147,000 sanadkii.
Warbixin ku saabsan mushaarka Xoghayaha Guud ee Ururka Islaamka lama hayo, laakiin madaxda heerka labaad ee ururka ayaa qaata $ 80 kun sanadkiiba sidoo kale waxaa u dheer gunnooyin.
Madaxda sare ee Midowga Afrika ayaa qaata 70 kun oo doolar sanad walba, waxaa sidoo kale u dheer gunnooyin.
Bangiga Horumarinta Afrika, mushaharka shaqaalaha ugu sarreeya ayaa u dhaxeeya $ 138 ilaa $ 144,000 sanadkiiba.
Wax macluumaad ah lagama hayo mushaarka madaxda sare GCC ee Khaliijka iyo golaha Midowga Carabta ee Maghreb.